I-OnePlus 6T iza kuza ne-Android Pie natively | I-Androidsis
UEder Ferreño | | OnePlus, Iinguqulelo ze-Android
Nge-30 ka-Okthobha, i-OnePlus 6T iya kuziswa ngokusemthethweni. Isiphelo esiphakamileyo somenzi waseTshayina yenye yeefowuni ekulindeleke ukuba ziwe. Yimodeli ethembisa ukwazisa ngotshintsho olwahlukileyo malunga nefowuni eyathi yaziswa ngokusesikweni kule ntwasahlobo. Umzekelo, u-CEO wenkampani ngokwakhe uqinisekisile ukuba isixhobo siza kufika ngenzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen, njengoko sibona ngokuhamba rhoqo.
Omnye umbuzo ngulo Yeyiphi inguqulelo ye-Android eya kuthi le OnePlus 6T ifike kuyo kwintengiso?. Kuba ngoku sibona ukuqhubela phambili kwePie ye-Android okanye banokukhetha i-Android Oreo. Okokugqibela, umphathi wenkampani ngokwakhe uyiqinisekisile.
I-Android Pie iya kuba luhlobo lwenkqubo yokusebenza eya kuthi ifike ngokwendalo kwisixhobo somenzi waseTshayina. Ke iya kufika kunye nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza kwintengiso. Iindaba ezimnandi kwabo banomdla kwisiphelo esiphakamileyo, abangasayi kulinda ukuba uhlaziyo lufike.
I-OnePlus 6T iya kulandela ngale ndlela iHuawei Mate 20 ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Inguqulelo engabonakali kwidatha yokuhambisa i-Android kwaye ngoku inikwe umda kwiimodeli ezithile kuluhlu oluphezulu. Kwaye ngoku le modeli yohlobo lwaseTshayina yongezwa.
Malunga ne-OnePlus 6T ezinye iinkcukacha sele zisaziwa, ikakhulu ichazwe yinkampani uqobo. Ngokwendlela yoyilo, isixhobo siya kubheja kwiscreen esinotshi emile njengokuhla kwamanzi. Iya kugcina ikhamera yangasemva emibini, ekunokwenzeka ukuba iyafana neyangaphambili.
Ukuphehlelelwa komnxeba kucwangciselwe ukuqala kuka-Novemba. Sele isaziwa ukuba ngo-Novemba 5 izakufika e-China. Ngokuqinisekileyo ngaphambi kokunikezelwa kwayo siya kwazi ngakumbi ngokufika kwe-OnePlus 6T eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-OnePlus 6T iza kufika ngePie ye-Android
Indlela yokongeza iiakhawunti ezininzi kwi-Gmail ye-Android